आधा घ,ण्टा अघि यस्तो तस्बिर राखेकी डा. दीपाको भयो दु,खद् नि,धन (भिडियो हेर्नुस्):: Mero Desh
आधा घ,ण्टा अघि यस्तो तस्बिर राखेकी डा. दीपाको भयो दु,खद् नि,धन (भिडियो हेर्नुस्)
Published on: २० भाद्र २०७८, आईतवार १०:११
ए,जेन्सी । डाक्टर दीपाले लगातार आफ्नो यात्रा सोशल मिडियामा अपडेट गरिरहेकी थिइन्, मानिसहरू लाई प्रकृतिको सुन्दर दृश्यहरूबारे जानकारी दिँदै थिइन् । तर दीपा शर्मा वा सोशल मिडियासँग सम्बन्धित कसैलाई पनि यो अन्तिम क्ष’णहरू हु,नेछन् भनेर सोचेकै थिएनन्।
डा दीपा शर्मा किन्नौरको पहिरोमा उनको ज्यान गयो। भा रत हिमाचल प्रदेशको किन्नौरमा आइ तवार हृदय दर्दनाक दुर्घटना भयो। एक लामो समय को लागि घर मा ब न्ध नबाट स्वतन्त्रता पछि, एक खुशीको समय बिताउन आए का पर्य,टक पहिरोमा परे ।
पहिरोमा जम्मा नौ जनाको मृत्यु भयो। यसमा आयु’र्वेद डाक्टर दीपा शर्मा पनि थिइन् जसले आधा घन्टा अगाडि उनको तस्विर पो’ष्ट गरेर लेखेकी थिइन् प्रकृति बिना जि वन छैन ।
दीपा शर्मा सोशल मिडियामा धेरै सक्रिय थिइन् । उनी पहिलो पटक एकल यात्रामा गइन्। दीपाले लगातार आ फ्नो यात्रा सोशल मिडियामा अ’प डेट गरिरहेकी थिइन्,
मानिसहरूलाई प्रकृतिको सुन्दर दृश्यहरूबारे जानकारी दिँदै थिइन् । तर उनको जिवनको यो अन्तिम यात्रा हुनेछ भन्ने कसैले कल्पना गरेका थिएनन् ।
आइतबार घटना हुनुभन्दा आधा घ,ण्टा पहिला उनले ट्वी टरमा एक तस्बिर सार्वजनिक गरेकी छन् । उनले लेखिन् कि मअहिले भारतको अ न्तिम बिन्दुमा उभिएकी छु, जहाँ सम्म साधारण नागरिकहरूलाई जान दिइन्छ। तिब्बत यस भन्दा ८० किलोमिटर अ,गाडि छ, जुन चीनले ओगटे को छ।
सोशल मीडियामा दीपा शर्माको यो तस्वीर मान्छे हरूले मन पराएका छन् । यस यात्राको आनन्द उनको अनुहारमा पनि देखिन्थ्यो, तर कसैलाई थाहा थिएन कि यो अन्तिम तस्वीर हो।
सोशल मीडियामा उनका प्र`शंसकहरू ३४ वर्षीया दीपा शर्माको आकस्मिक नि,धनबाट अ’चम्मित छन्।